NK | सरकारी नियमविपरीत किन खुले प्रदेश नं २ मा विद्यालयहरू
सरकारी नियमविपरीत किन खुले प्रदेश नं २ मा विद्यालयहरू
जनकपुर । कोरोनाभाइरस फैलिने क्रम नरोकिएको र सरकारले विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा पठनपाठन सञ्चालन नगर्ने मापदण्ड बनाएको भए पनि प्रदेश नं २ का कतिपय जिल्लाका विद्यालयहरू अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूले बताएका छन्।
सरकारले हाल वैकल्पिक पद्धतिका माध्यमबाट मात्र पठनपाठन गराउन निर्देशिका जारी गरेको छ। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश नं २ का कतिपय विद्यालयले प्रत्यक्ष पठनपाठन सुरु गरेका हुन्।
उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको दाबी छ। कतिपय अन्य विद्यालयहरू पनि खुल्ने क्रममा रहेको बताइएको छ।
प्रदेश नं २ मा अहिलेसम्म १६,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यहाँका आठ जिल्लामा अहिले पनि १,१०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने १४० जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भइसकेको छ।
महामारीका बेला वैकल्पिक विधिबाट गराइएको पठनपाठन प्रभावकारी नभएको तथा सबै विद्यार्थीको प्रविधिमा सहज पहुँच नभएको हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालय खोल्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ।
के भन्छन् अभिभावक?
कतिपय अभिभावकहरू वैकल्पिक वा प्रत्यक्ष अध्यापन दुवै माध्यममा आफ्ना बालबालिका मारमा परेको बताउँछन्।
१०० वर्षअघि … एउटा घातक रोगबाट जोगिन कक्षा कोठा बाहिरको सिकाइ यसरी गरिएको थियो
महामारीपछि के सबै छात्रा विद्यालय फर्किएलान्
बाराको सिमरा डुमरवानाकी अम्बिका खतिवडा भन्छिन्,”(बिजुलीको) लाइन छैन, घरमा जति केटाकेटी छन् उत्तिकै सङ्ख्यामा मोबाइल फोन चाहिने भयो। यो वैकल्पिक पठाइ भन्ने हुनेखानेका लागि त ठिकै होला तर हामीजस्तालाई त मर्का परेको छ।”
प्रदेश नं २ का केही जिल्लामा विद्यालयमै पठनपाठन सुरु भएको छ। तस्बिर
“अर्कोतिर स्कूल त खुलेको छ। त्यहाँ पनि सबैतिरबाट केटाकेटी आएका हुन्छन्। सुरक्षा अपनाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। बच्चा सानो छ, हात धुनु भनेर कसरी सिकाउने त्यसैले मैले त स्कूल नै पठाएको छैन।”
अभिभावक सङ्घ पर्साका अध्यक्ष अमर गौतम चाहिँ विद्यार्थीको पढाइ एक वर्ष नै बर्बाद हुन लागेको भन्दै सधैँ विद्यालय बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।
उनले भने, “अबका दिनमा कोरोनाभाइरको महामारी भनेर बन्द गरेर बस्न सकिँदैन। यसबाट बच्ने उपाय र सावधानी अपनाएर विद्यालय खोलेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्दा ठिक हुन्छ।”
“सरकारले लकडाउन गरेर केही तयारी गरेन। वैकल्पिक शिक्षा भनेर उर्दी मात्र जारी गर्‍यो। सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आइसके अनि विद्यालयले मात्र कोरोनाभाइरस फैलिने हो र?”
विद्यालय सञ्चालकका तर्क कस्ता?
वैकल्पिक शिक्षा खासै प्रभावकारी नभएकाले कारण सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको निजी विद्यालहरूको सङ्गठन प्याब्सन वीरगन्जका अध्यक्ष आलोक चौरसियाले बताए।
उनी भन्छन्, “छिमेकी जिल्लामा विद्यालय खुलेका छन्। त्यसैले विभिन्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ आगामी कार्तिक ११ गतेदेखि पर्सामा पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।”
उनले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदा र इन्टरनेटको समस्याले अनलाइन कक्षामा बालबालिकाको सहभागिता कम भएको बताए।
सबै विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगराउने हो भने विद्यालय खोल्नुपर्ने उनको तर्क छ।
प्याब्सन बाराका अध्यक्ष हरिदेव खरेलले राहतका भरमा जीविका चलाउनुपर्ने अभिभावकले विद्यालय खोलेको बताए। महँगो मोबाइल किनेर बच्चालाई पढाउने अवस्था नभएकाले त्यस्ता परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालयमा पढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
खरेलले यही असोज १ गतेदेखि आफ्नो विद्यालय सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए।
उनले अन्य विधिका साथसाथै कुनै उपाय नहुनेका लागि विद्यालय खोलिएको र त्यो सरकारी निर्देशिका अनुसार नै गरिएको दाबी गरे।
पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकास्थित हाल पठनपाठन भइरहेको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकुमार यादव भन्छन्, “विद्यालय सञ्चालन नहुँदा अभिभावकहरूले बालबालिका बिग्रिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँहरूले नै विद्यालय खोल्न दबाव दिनुभयो। त्यसैले सामाजिक दूरी कामय गरेर हामीले विद्यालय चलाएका हौँ।”
खोल्नै परे के गर्ने?
पर्साको पटेर्वा सुगौली गाँउपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतो चाहिँ हाल वैकल्पिक विधिबाट मात्र पठनपाठन भइरहेको बताउँछिन्।
उनले भनिन्, “टोलटोलमै गएर विद्यार्थी पढाउने काम भइरहेको छ। किनकि अहिलेकै अवस्थामा विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाउनु ठिक हुँदैन। छठपछि विद्यालय खोल्ने कि अहिले नै भन्ने निर्णय भइसको छैन।”
अहिले खुलेका विद्यालयमा भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थित भएमा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने एक चिकित्सक डा. निरज सिंह बताउँछन्।
उनी विद्यालय खोल्नै पर्ने अवस्थामा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालन गर्न आग्रह गरे।
सङ्क्रमणको जोखिम अझै पनि रहिरहेकाले तत्कालै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिन सक्ने अवस्था नरहेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए। स्रोत बिबिसी नेपाली